Mihaino Sady Mamaly ny Vavaka Ataontsika ve Andriamanitra?
Ny Tilikambo Fiambenana | Oktobra 2015
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Batak (Toba) Bengali Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Goujrati Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Lamba Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pidgin (Cameroun) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | MAHASOA VE NY MIVAVAKA?
Misy Mihaino ve ny Vavaka Ataontsika?
Misy mihevitra fa lany fotoana fotsiny ianao rehefa mivavaka, satria tsy misy mihaino akory. Ny hafa indray efa nivavaka fa tsy nisy valiny, hono. Nisy lehilahy iray, ohatra, tsy nino an’Andriamanitra. Naka sary an-tsaina an’Andriamanitra izy, dia nivavaka hoe: “Mba bitsibitsiho kely fotsiny aho!” Hoy izy avy eo:‘Tsy niteny mihitsy Andriamanitra.’
Manome toky antsika anefa ny Baiboly fa tena misy Andriamanitra, ary mihaino ny vavaka ataontsika izy. Hita ao ity teny ho an’ny Israelita ity: ‘Hiantra anao Andriamanitra rehefa mandre ny fitarainanao. Raha vao mandre izany izy, dia hamaly anao.’ (Isaia 30:19) Milaza koa ny Ohabolana 15:8 hoe: ‘Mahafinaritra azy ny vavaky ny olo-mahitsy.’
Nivavaka tamin’ny Rainy i Jesosy ka “nohenoina” izy.—Hebreo 5:7.
Resahin’ny Baiboly hoe nohenoina ny vavaka nataon’ny olona sasany. Milaza ny Hebreo 5:7 fa “niangavy tamin’Ilay nahay namonjy azy tsy ho faty” i Jesosy, ka “nohenoina.” Mbola misy ohatra hafa koa ao amin’ny Daniela 9:21 sy ny 2 Tantara 7:1.
Nahoana àry no tsy mivaly ny vavaka ataon’ny olona sasany? Raha tiantsika hohenoina ny vavaka ataontsika, dia tsy maintsy mivavaka amin’i Jehovah, * ilay Andriamanitra resahin’ny Baiboly isika, fa tsy amin’ny andriamani-kafa na amin’ny razana. Tokony ‘hifanaraka amin’ny sitrapony’ koa ny zavatra angatahantsika. ‘Hihaino antsika izy’, raha manao an’izany isika. (1 Jaona 5:14) Tokony hianatra momba an’i Jehovah sy ny sitrapony àry isika.
Betsaka no milaza fa tsy fombafomba fotsiny ny vavaka, fa tena mihaino sy mamaly azy ireny Andriamanitra. Hoy i Isaac, any Kenya: “Nivavaka aho mba hahazo izay lazain’ny Baiboly. Tsy ela taorian’izay, dia nisy olona nanatona ahy ary nanasa ahy hianatra Baiboly.” Te hiala tamin’ny sigara i Hilda, any Philippines. Tsy vitany mihitsy ilay izy, ka hoy ny vadiny: “Maninona raha mangataka fanampiana amin’Andriamanitra?” Narahiny ny tenin’ny vadiny, dia hoy izy: “Gaga be aho fa nanampy ahy Izy. Hoatran’ny tonga dia lasa tsy te hifoka izany intsony aho. Vitako ny niala tamin’ilay izy.”
Mety hihaino anao ve Andriamanitra rehefa resahinao aminy izay mampanahy anao, ary mifanaraka amin’ny sitrapony ilay izy?
^ feh. 6 Jehovah no anaran’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly.
Hizara Hizara Misy Mihaino ve ny Vavaka Ataontsika?
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana ny Olona no Mivavaka?
MATOAN-DAHATSORATRA Misy Mihaino ve ny Vavaka Ataontsika?
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana Isika no Asain’Andriamanitra Mivavaka?
MATOAN-DAHATSORATRA Tena Manampy Anao ve ny Vavaka?
MANOVA OLONA NY BAIBOLY Afaka Manampy Olona Aho na dia Jamba Aza
TORO LALANA FAHINY FA MBOLA MANDAITRA ANKEHITRINY Miezaha Hamela Heloka
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mahasoa ve ny Mivavaka?
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mahasoa ve ny Mivavaka?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mahasoa ve ny Mivavaka?
Mahasoa ve ny Mivavaka?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mahasoa ve ny Mivavaka?